Mamerina ny tsaho momba ny Apple Watch Series 8 miaraka amin'ny endrika fisaka | iPhone News
Angel Gonzalez | 19/05/2022 16:28 | Apple Watch, About us
Ny Apple Watch dia nanjary a manan-danja ho an'ny mpampiasa maro ary ny andrasana amin'ny taranaka vaovao dia tena ambony. Tamin'ny taon-dasa, setroka be dia be no niforona manodidina ny endrika vaovao izay ho an'ny Apple Watch Series 7. Novinavinaina fa ny sisiny boribory dia hajanona amin'ny endrika mahitsizoro sy fisaka kokoa. Tamin'ny farany dia tsy nisy vintana ary nisy ny fitohizana. Na izany aza, Ny tsaho momba ny famolavolana mahafa-po indray manodidina ny Apple Watch Series 8 ary azo inoana fa herintaona aty aoriana, Apple dia hanao ny dingana ho an'ny tsara.
Manakoako manodidina ny Apple Watch Series 8 ny endrika fisaka
Tsy manonofy ianao fa toa a efa hita sahady Amin'ny fitsipika rehetra. Averinay indray ny zava-nitranga tamin'ny taon-dasa nefa mbola lavitra ny lalana. Izany rehetra izany dia nanomboka tamin'ny fampahalalam-baovao avy amin'ilay mpanafika fanta-daza Jon Prosser momba ny mety ho endrika vaovao amin'ny Apple Watch Series 7. Raha ny marina, dia nahazo drafitra CAD momba ilay heverina ho famolavolana izy ary namolavola andian-kevitra maromaro, niaraka tamin'ny fanentanana media lehibe, tamin'ny izay endrika mahitsizoro sy fisaka vaovao mamela ny fiolahana amin'ny taranaka rehetra an'ny Apple Watch hatramin'izao. Na izany aza, ny famolavolana farany an'ny andiany faha-7 dia tsy nitovy tamin'ireo hevitra na nanafoana ny sisiny boribory.
Ankehitriny dia anjaran'ny Apple Watch Series 8 izay hahita ny mazava amin'ny volana ho avy. Ny tsaho dia manondro vokatra vaovao telo amin'ity famelabelarana ity. Amin'ny lafiny iray, ny Apple Watch Series 8. Amin'ny lafiny iray, ny andiany faharoa amin'ny SE. Ary farany, nisy fanontana vaovao nantsoina edisiona explorer, miaraka amin'ny fitaovana matanjaka kokoa mikendry ny fanatanjahan-tena mampidi-doza sy ny toe-javatra tafahoatra.
Ny tsaho momba ny Apple Watch Series 8 dia mitombo ny fanatsarana ny fahitana torimaso
Heno avy amin'ny loharanom-baovao androany fa misy fampisehoana fitaratra eo anoloana ho an'ny fampisehoana famantaranandro paoma. Ny vintana lehibe fa ity no fitaratra anoloana ho an'ny Apple Watch Series 8.
Tsy mbola naheno momba ny fomba fanamboarana trano na modely inona.
sary fanoharana ihany fa tsy tena izy. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE
— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) Enga anie 16, 2022
Ilay mpampiasa ShrimpApplePro fantatra ao amin'ny Twitter noho ny fivoahany ny iPhone 14 Pro, ankoatry ny hafa, dia nanome toky izany ny tontolon'ny Apple Watch Series 8 dia ho tonga mahitsizoro. Manome toky koa izy fa tsy manana fampahalalana momba ny sisa amin'ny famolavolana na ny boaty toy izany, ka tsy fantatsika na inona na inona. Fa ny azo antoka dia tokony hampidirina ao anaty boaty mahitsizoro ny kristaly mahitsizoro. Mety hamelona indray izany ny hevitra fisaka sy mahitsizoro Apple Watch izay nanomboka, araka ny voalazanay, Jon Prosser herintaona lasa izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Tsaho momba ny Apple Watch Series 8 miaraka amin'ny fiverenan'ny endrika fisaka
Izany no fomba mora azonao manakana ny votoatin'ny olon-dehibe amin'ny iPhone sy iPad an'ny zanakao